ciyaartoy reer Mongolia ee rajadiisa ay soo jiidatay dad badan | Hangool News
Hangolnews:- Sheekada 14 jir u dhashay dalka Mongolia ee Aasiya ayaa xiisa badan gelisay dad badan ka dib markii uu la kulmay qiso saameyn ku yeelatay noloshiisa.
Ciyaartoygan oo aad u daneyn jiray ciyaarta kubadda cagta ayaa marwalba oo iskuulka uu aadayo wuxuu derbiga ku laadi jiray kubadda, wuxuuna orod ku tegi jiray iskuulka si uu jimcsi uga dhigto.
Wuxuu marwalba jeclaa in uu noqdo ciyaartoy ka dheela dalalka dibadda oo magaciisana lagu xardho dusha sare ee funaanadiisa.
Nasiib wanaag riyadaas wuu ku guuleystay balse nasiib darro, wuxuu la kulmay arrin ku reebtay in uu faraha ka qaado kubadad cagta oo dhan.
Ochiroo Batbold wuxuu 5 sano jir markii qoyskiisa ay u wareegeen gobolka Ulaanbaatar, halkaas oo dad badan ay aaminsan yihiin in fursado badan ay ka jiraan.
Qoraalka sawirka,Hawo wasaqeysan ayaa ka jirtay, Ulaanbaatar (Sawirka 2012). Dhowaan ayaa la mamnuucay soo saaridda dhuxusha taas oo sababtay hawo nadiif ah.
Dalka Mongolia, ciyaarta kubadda cagta kama ahan mid aad loo xiiseeyo sababo la xiriira cimilada awgeed, waxaana dhallinyarada ay doorbidaan ciyaaro ay ka mid yihiin lagdanta.
Balse Ochiroo markii uu yaraa wuxuu guriga ku dheeli jiray ciyaaraha kubada cagta oo game ah ee loo yaqaano PlayStation.
Saaxiibbadii ka weyn waxay bareen kooxda Manchester United ee ka dheesha horyaalka Britain oo uu markii dambe la dhacay.
Marwalba wuxuu doonayay in uu noqdo xiddigii weerarka uga dheeli jiray kooxda United, ee Wayne Rooney, laba sano ka dibna wuxuu ku biiray koox kubadda cagta ah.
Qoraalka sawirka,Ochiroo (oo funaanad cad xiran) – kaas oo loo garanayo Wazza, looguna magac daray Wayne Rooney – wuxuuna tababar ku qaadanayaa iskuulka.
Wuxuu aad u daneynayay in uu ka mid noqdo kooxda kubadda cagta ee Mongolia, balse ma aysan jirin fursad uga banaaneyd ciyaartoyda yaryar, taageerayaashuna waxay daneyn jireen daawashada horyaalka kubada cagta ee Britain.
Balse sannadkii 2013-kii wuxuu aasaasay koox uu isaga leeyahay oo lagu magacaabo Bayangol FC.
Kooxdaas xilligaas waxay u baahneyd cid caawisa, wuxuuna la xiriiray nin lagu magacaabo Paul Watson oo u dhashay Britain, kaas oo horay buug uga qoray arrimaha tababarka kubadda cagta.
“Waan ogaa in aanan saxnayn markii aan faraha la galay wax noocaas oo kale ah,” ayuu yiri Paul.
“35 canug baa ii joogta, midkoodna aniga ma dhalin”
Sadio Mane oo sharraxay sababta ay hooyadiis ‘u neceb tahay Kubadda Cagta’
Bishii oktoobar ee isla sannadkaas, Paul wuxuu u soo duulay dalka Mongolia, xilligaasina waxaa kooxda ku soo biiray ciyaartoy cusub, kuwaas oo barnaamij uu ka sameeyay mid ka mid ah telefisheinnada wadankaas ee soo bandhiga dadka hammiga leh.
Ciyaartoydaas waxaa ka mid ahaa Ochiroo, balse ma uusan noqonin ciyaartoygii ugu xirfadda fiicnaa, laakiin wuxuu aad u soo jiitay Paul iyo dadkale oo la socday.
Qoraalka sawirka,Iskuulka 107, in Ulaanbaatar, oo ah meesha uu Ochiroo wax ku bartay
Paul iyo kooxdiisa, subax ka mid ah subaxyada, waxay baabuur u qaateen iskuulka, si ay u soo ogaadaan in uu tababarto aroorti.
“Waxaan baabuurka soo marinay meel aad u ceeriyaamo badan, oo buur dusheeda ah, qabowna ahayd,” ayuu yiri Enki oo ay wada socdeen Paul.
Wuxuu u sheegay in halkaas ay ugu tageen Ochiroo oo keligii ah, kuna jimicsanayay qolka jimicsiga.
Qoraalka sawirka,Bayangol hadda waa koox dhallinyaro oo guulo badan hiigsaneysa
Kooxdii Bayangol ee u asaasay Ochiroo waxay ku guuleysteen horyaal ka mid ah kuwa hoose ee laga dheelo dalkaas, ugu dambeynna waxay u soo wareegeen heerarka kala duwan ee horyaalada kubada cagta ee Mongolia.
Markii ay dhowr horyaal oo hoose ay ku guuleysteen waxay u soo gudbeen horyaal ugu weyn dalkaas ee MPL.
Khasaarihii uu ka soo kabsaday Ochiroo
Markii ay halkaas mareysay, Ochiroo waxaa Facebook kala soo xiriirray wakiil fadhigiisu yahay dalka Mareykanka, oo ciyaartoyda u kala iibiya kooxaha kubada cagta, wuxuuna u soo bandhigay in ay tijaabo ku sameyneyso kooxda kubada cagta ee Los Angeles Galaxy, loogana baahan yahay in uu bixiyo lacag gaareysa $6 kun oo dollar.
“Wakiilki wuu aamusay in muddo ah, mana uusan garaneynin sababta,” ayuu yiri Paul oo intaa raaciyay in ay ku baraarugsanaayeen arrinta.
Markii arrintaas loo soo bandhigay Ochiroo, wuxuu damcay in uu kala tashado Paul.
“Sida ay u shaqeyaan kooxahan, waxay ku oranayaan cidna ha u sheegin, gaar ahaan kooxda aad ka tirsan tahay,” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Paul.
Qoraalka sawirka,”Weligii ma sameynin tababar nus ah xitaa,” ayuu yiri Enki. “Wuxuuna ku bixiyay waqtigiisa boqolkiiba 110%.”
Ochiroo wuxuu la kulmay dhac la xiriiray tijaabadii, waxayna qoyskiisa oo soo amaahday lacagta ay siiyeen qolyihiin tuugada ahaa, ku qasbanaadeen in ay iibiyaan gurigooda.
Markii Ochiroo lagu khiyaamay arrintaas, waxaa la soo darsay xaalad adag iyo walwal. “Waxaan doonayay in aan aamino qofwalba oo i caawin kara,” ayuu yiri.
Wuxuu intaa raaciyay in go’aanka uu ku bixiyay lacagta uu qaatay isagoo caadifadeysan.
Dadkii la soo xiriiray ee u sheegtay inay ahaayeen wakiillo dhanka kubada cagta ah, markii ay heleen lacagta, way ka gaabsadeen ciyaaryahankaas dhallinyarada ah.
Balse Ochiroo ayaa markale la xiriiray oo wuxuu ku yiri: “Ciyaartoy kale ayaa doonaya inuu ka qeybgalo tijaabada oo haya lacagtii uu bixin lahaa, markiiba way u soo jawaabeen, waxaana la hadlay Paul”.
Qofka isku sheegay in uu yahay wakiil wuxuu diiday in uu la hadlo Paul, balse waxaa u suurtagashay in uu helo cinwaankiisa Los Angeles, wuxuuna ku dacweeyay booliska. Nasiib darro, waxba laga ma qabanin.
Warkii oo kooban sidaas waxaa lacagtooda ku waayay Ochiroo iyo qoyskiisa, inkastoo Paul uu isku dayay in uu u soo dhiciyo lacagtiis.
“Waxaan siddeed bilood ku qaatay la shaqeynta koox daroogada ka ganacsata”
Markii sheekadda ciyaartoygan lagu daabacay wargeyska London Evening standard, waxaa u gurmaday dad badan oo ay ka mid yihiin taageerayaasha kooxda kubada cagta ee Manchester United oo dib u helay lacagtii laga dhacay.
Waxaa sidaas lagu badbaadiyay gurigii Ochiroo, inkastoo uu ka niyad jabay sii wadidda ciyaaraha kubadda cagta.
Kooxdii uu katirsanaa Ochiroo waxay marar badan la kulantay guuldarro, isagu se wuxuu ku biiray koox hanti leh oo ka dhisan dalkaas oo lagu magacaabo UB city.
Waxaa suurtagal in aysan ahayn kooxda Manchester United iyo horyaalka dalka britain ka ciyaari karta, balse magaca Ochiroo waxaa lagu xardhay dhabarka dambe ee funaannada kooxda cusub ee uu ku biiray, waxaana sidaas ku rumoobay riyadii Ochiroo.